သင့်ကားကို သက်တမ်းပိုမို ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် အချက် ( ၇ ) ချက်
HomeLifestyleသင့်ကားကို သက်တမ်းပိုမို ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် အချက် ( ၇ ) ချက်
Uncle Jam February 20, 2019
မော်တော်ကား ကိုမောင်းနှင်သူများဟာ မောင်းနှင်နေသည့်ကားကို သင့်တော်စွာ ဂရုစိုက်ရမည်ကို မစဉ်းစားမိကြပါဘူးသို့သော်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးတည့်လွယ်ကူမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါက ကားအတွက် ဈေးကြီးသောဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို လုပ်စရာမလိုပဲ ကားကို အထိအခိုက်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၇. တာယာ လေဖိအား ကို အရမ်း နည်းလွန်း များလွန်းထားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ
ရံဖန်ရံခါ ကားတာယာလေဖိအားကို အရမ်းနည်းလွန်း များလွန်းစွာထားတတ်ကြပါတယ် ၊ ထိုသို့သောအခြေအနေကမော်တော်ယာဉ်၏လှောင်စာဆီကို ပိုမိုအသုံးပြုစေပြီး မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မှုကိုပါ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကားဘီးချော်ခြင်းနှင့် ယာဉ်မတော်တဆမှုပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ထိုသို့သောအခြေအနေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် သင့်ကားတာယာကို အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဦးစွာပထမအချက်မှာ သင့်ကားတာယာကို ရာသီအလိုက်လဲပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ရှေ့ကားတာယာနှင့် နောက်ကားတာယာကို တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လဲပေးပါ။
၆. ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းနှင့် အရှိန်မြှင့်မောင်းနှင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ
အရှိန်မြှင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းသည် ကားကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်၏ အမျိုးမျိုးသော စနစ်တွင် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် ဂီယာအုံနှင့် အင်ဂျင်ကို ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက်စေသည့်အပြင် ဘရိတ်စနစ်တွင်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများသည်လည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ယိုယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘရိတ်၏စွမ်းဆောင်ရည်လည်းကျဆင်းသွားသည့်အတွက် ယာဉ်မတော်တဆမှုကိုပါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
၅. မှန်ကန်စွာ ပါကင်ထိုးပါ
ကားပါကင်ထိုးခြင်းက လွယ်ကူသောကိစ္စတော့မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် မောင်းတတ်ခါစ ယာဉ်မောင်းများအတွက် ခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူများက ကားပါကင်ထိုးသည့်အခါ ကားကို လုံးဝမရပ်ပဲ ဂီယာကို Drive မှ Reverse သို့ပြောင်းတတ်ပါတယ်။ထိုသို့သောအပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါက အော်တိုဂီယာပြောင်းမှုကို ထိခိုက်စေပြီး ဈေးကြီးသော ပြင်ဆင်မှုကိုပါ လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကားပါကင်ထိုးသည့်အခါ ကားကို လုံးဝရပ်လိုက်ပြီးမှသာ ဂီယာပြောင်းသင့်ပါတယ်။
၄. ကားဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ အချက်ပေးသင်္ကေတများကို လျစ်လျူမရှုပါနှင့်
သင့်ကားဒိုင်ခွက်ပေါ်ကအချက်ပေးသင်္ကေတများကသင့်ကား တစ်ခုခု မှားယွင်းနေကြောင်းကို သတိပေးနေပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် ကားအင်ဂျင်၏ အပူချိန် မြင့်လွန်းနေခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်မှားယွင်းနေခြင်း၊ ဘရိတ်ဆီပမာဏနည်းလွန်းနေခြင်းစသည့် အခြေအနေများကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ထိုသို့အချက်ပြမှုကို တွေ့ရှိပါက လျင်မြန်စွာ ကားပြင်ဆိုင်ကို သွားပါ။ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါကဈေးကြီးသော ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ရန်မလိုသည့်အပြင် မတော်တဆမှုကိုပါ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
၃. မော်တော်ယာဉ်ကို စစ်ဆေးဖို့နှင့် ပြင်ဆင်ပေးဖို့မမေ့ပါနှင့်
မော်တော်ယာဉ်ပျက်ဆီးခြင်းတွင်တွေ့ရများသော အကြောင်းပြချက်မှာ ယာဉ်မောင်းသူများသည်မော်တော်ယာဉ်ကိုထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့လျစ်လျူရှု ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကစရိတ်စက ကြီးမားသော ကားပြင်ဆင်မှုကို ရှောင်ရှားနိင်သော အရေးပါသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် မော်တော်ယာဉ်ကို မိုင်ပေါင်း ၆၂၀ မောင်းနှင်ပြီးပါက ဆီပမာဏကို ပြန်လည် စစ်ဆေးသင့်ပြီး မိုင်ပေါင်း ၂၅၀ မောင်းနှင်ပြီးပါက ကားအင်ဂျင်လေပေါက်ကို လဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် စစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်သင့်အပြင် နေ့တိုင်းစစ်ဆေးမှု(အင်ဂျင်ဆီပမာဏ၊ တာယာလေဖိအား၊လေကာမှန် စသည်ဖြင့်) ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့မမေ့ပါနှင့်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများသည် ရာသီဥတုနှင့်မောင်းနှင်သည့် ခရီးမိုင်ပေါ်မူတည်သည်ကို အမှတ်ရပါ။
၂. ပစ္စည်းဝန်ပိုတင်မောင်းနှင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ
ဝန်ပိုတင်မောင်းနှင်ခြင်းကကား၏ အောက်ပိုင်းစနစ်၊ စတီယာရင်စနစ်၊ဂီယာစနစ်၊တာယာနှင့် အင်ဂျင်စသည့် စနစ်အားလုံးလိုလိုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီလိုဝန်ပိုတင်မောင်းနှင်ခြင်းကသင့်ကားရဲ့ လောင်စာဆီ ကိုပိုမိုသုံးစွဲမှုဖြစ်စေသည့်အပြင် လမ်းမပေါ်တွင် ကား၏မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းကိုပါ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေရန် ယာဉ်မောင်းသူသည် မောင်းနှင်မည့်ယာဉ်၏ အများဆုံးတင်နိုင်သောဝန်ပမာဏအတိုင်းသာတင်ဆောင်ပြီး မောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။ထို့အပြင် ကားတွင် အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများ လျှော့ချပြီး အမှန်အသုံးဝင်သောပစ္စည်းကိုသာတင်သင့်ပါတယ်။
၁. ကား၏ကလပ်ခ်ျ (clutch) ကို အများကြီး အလုပ်မပေးပါနှင့်
ထိုသို့သော အမှားသည် လက်ထိုးဂီယာစနစ်ရှိသော ကားကိုမောင်းနှင်သူများတွင် အတွေ့များသော အမှားဖြစ်ပါတယ်။ မီးပွိုင့် အကြာကြီးမိနေချိန်တွင်ကလပ်ခ်ျကိုအကြာကြီးမနင်းထားပါနှင့်။ကားရပ်နားသင့်သောအချိန်တွင် အနားမပေးပဲ ကလပ်ခ်ျနင်းကာ ကားကို အလုပ်ပိုလုပ်စေသည့်အတွက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်ကိုလျင်မြန်စွာချို့ယွင်းစေပါတယ်။ တိုတောင်းသောရပ်တန့်ချိန်တွင် ဂီယာကို ပုံမှန်(Neutral) စနစ်သို့ပြောင်းပြီး စတင်မောင်းနှင်တော့မည်ဆိုမှ ကလပ်ခ်ျကိုနင်းပါ။
အပိုဆောင်းလှည့်ကွက်- ကားလေကာမှန်အက်ရာကို ကြက်သွန်ဖြူသုံးပြီး ဘယ်လိုပြင်နိုင်မလဲ
ဟင်းပွဲကို ပိုမြိန်စေသည့် ကြက်သွန်ဖြူ၏အရသာနှင့် အနံ့ကြောင့် လူတော်တော်များများကြက်သွန်ဖြူကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သို့သော် ကြက်သွန်ဖြူ၏ကားပြင်ဆင်မှုအတွက်အံ့သြဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုကိုသင်သိပါသလား။ကြက်သွန်ဖြူတစ်မွှာယူပြီး ကြက်သွန်ဖြူကိုဒေါင်လိုက်လှီးချလိုက်ပါ။ ထို့နောက် လှီးထားသောကြက်သွန်ဖြူဖြင့် လေကာမှန်အက်ရာကိုပွတ်ပြီး ထွက်လာသောအရည်ကို စက္ကူ သို့မဟုတ် လက်သုတ်ပုဝါဖြင့် သုတ်လိုက်ပါ။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်သော်ငြားလည်း ထိုအက်ရာကို ပြန်မပြင်မှီအချိန်အထိ အက်ရာပိုမဆိုးသွားနိုင်အောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့လည်းကားကိုတစ်သက်လုံးကြာရှည်စွာ သုံးနိုင်သောနည်းလမ်းရှိပါက ကောမန့်တွင်မျှဝေပေးပါဦး…
Credit – Min Thu (Daily Hot News)
မျောတျောကား ကိုမောငျးနှငျသူမြားဟာ မောငျးနှငျနသေညျ့ကားကို သငျ့တျောစှာ ဂရုစိုကျရမညျကို မစဉျးစားမိကွပါဘူးသို့သျောလညျး အောကျဖျောပွပါ အသုံးတညျ့လှယျကူမညျ့ နညျးလမျးမြားကို လိုကျနာပါက ကားအတှကျ ဈေးကွီးသောဝနျဆောငျမှုနှငျ့ ပွုပွငျထိနျးသိမျးမှုမြားကို လုပျစရာမလိုပဲ ကားကို အထိအခိုကျမရှိ အသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၇. တာယာ လဖေိအား ကို အရမျး နညျးလှနျး မြားလှနျးထားခွငျးမှ ရှောငျကွဉျပါ
ရံဖနျရံခါ ကားတာယာလဖေိအားကို အရမျးနညျးလှနျး မြားလှနျးစှာထားတတျကွပါတယျ ၊ ထိုသို့သောအခွအေနကေမျောတျောယာဉျ၏လှောငျစာဆီကို ပိုမိုအသုံးပွုစပွေီး မျောတျောယာဉျမောငျးနှငျမှုကိုပါ ဆိုးကြိုးသကျရောကျစပေါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ကားဘီးခြျောခွငျးနှငျ့ ယာဉျမတျောတဆမှုပါ ဖွဈပှားစနေိုငျပါတယျ။ထိုသို့သောအခွအေနကေိုရှောငျရှားနိုငျရနျ သငျ့ကားတာယာကို အခြိနျနဲ့လိုကျပွီး ပွောငျးလဲဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဦးစှာပထမအခကျြမှာ သငျ့ကားတာယာကို ရာသီအလိုကျလဲပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့။ ဒုတိယအခကျြအနဖွေငျ့ ရှကေ့ားတာယာနှငျ့ နောကျကားတာယာကို တဈနှဈလြှငျ အနညျးဆုံးတဈကွိမျလဲပေးပါ။
၆. ရုတျတရကျ ဘရိတျအုပျခွငျးနှငျ့ အရှိနျမွှငျ့မောငျးနှငျခွငျးကို ရှောငျကွဉျပါ
အရှိနျမွှငျ့မောငျးနှငျခွငျးနှငျ့ ရုတျတရကျ ဘရိတျအုပျခွငျးသညျ ကားကို ဆိုးဝါးစှာ ထိခိုကျစပေါတယျ။ မျောတျောယာဉျ၏ အမြိုးမြိုးသော စနဈတှငျ ဆိုးကြိုးသကျရောကျစပေါတယျ။ဥပမာအားဖွငျ့ ဂီယာအုံနှငျ့ အငျဂငျြကို ဆိုးဝါးစှာ ထိခိုကျစသေညျ့အပွငျ ဘရိတျစနဈတှငျပါဝငျသော အစိတျအပိုငျးမြားသညျလညျး မွနျမွနျဆနျဆနျ ယိုယှငျးသှားနိုငျပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဘရိတျ၏စှမျးဆောငျရညျလညျးကဆြငျးသှားသညျ့အတှကျ ယာဉျမတျောတဆမှုကိုပါဖွဈပျေါစပေါတယျ။
၅. မှနျကနျစှာ ပါကငျထိုးပါ
ကားပါကငျထိုးခွငျးက လှယျကူသောကိစ်စတော့မဟုတျပါ။ အထူးသဖွငျ့ မောငျးတတျခါစ ယာဉျမောငျးမြားအတှကျ ခကျခဲသောအရာဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ယာဉျမောငျးသူမြားက ကားပါကငျထိုးသညျ့အခါ ကားကို လုံးဝမရပျပဲ ဂီယာကို Drive မှ Reverse သို့ပွောငျးတတျပါတယျ။ထိုသို့သောအပွုအမူမြားကို ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။ထိုသို့လုပျဆောငျပါက အျောတိုဂီယာပွောငျးမှုကို ထိခိုကျစပွေီး ဈေးကွီးသော ပွငျဆငျမှုကိုပါ လုပျဆောငျရနိုငျပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ ကားပါကငျထိုးသညျ့အခါ ကားကို လုံးဝရပျလိုကျပွီးမှသာ ဂီယာပွောငျးသငျ့ပါတယျ။
၄. ကားဒိုငျခှကျပျေါရှိ အခကျြပေးသင်ျကတေမြားကို လဈြလြူမရှုပါနှငျ့
သငျ့ကားဒိုငျခှကျပျေါကအခကျြပေးသင်ျကတေမြားကသငျ့ကား တဈခုခု မှားယှငျးနကွေောငျးကို သတိပေးနပေါတယျ။ဥပမာအားဖွငျ့ ကားအငျဂငျြ၏ အပူခြိနျ မွငျ့လှနျးနခွေငျး၊ လြှပျစဈပိုငျးဆိုငျရာ စနဈမှားယှငျးနခွေငျး၊ ဘရိတျဆီပမာဏနညျးလှနျးနခွေငျးစသညျ့ အခွအေနမြေားကို ဖျောပွနပေါတယျ။ ထိုသို့အခကျြပွမှုကို တှရှေိ့ပါက လငျြမွနျစှာ ကားပွငျဆိုငျကို သှားပါ။ထိုသို့လုပျဆောငျပါကဈေးကွီးသော ပွငျဆငျမှုမြား လုပျရနျမလိုသညျ့အပွငျ မတျောတဆမှုကိုပါ ရှောငျရှားနိုငျပါတယျ။
၃. မျောတျောယာဉျကို စဈဆေးဖို့နှငျ့ ပွငျဆငျပေးဖို့မမပေ့ါနှငျ့
မျောတျောယာဉျပကျြဆီးခွငျးတှငျတှရေ့မြားသော အကွောငျးပွခကျြမှာ ယာဉျမောငျးသူမြားသညျမျောတျောယာဉျကိုထိနျးသိမျးမှုပွုလုပျဖို့လဈြလြူရှု ခွငျးဖွဈပါတယျ။မျောတျောယာဉျထိနျးသိမျးမှုပွုလုပျခွငျးကစရိတျစက ကွီးမားသော ကားပွငျဆငျမှုကို ရှောငျရှားနိငျသော အရေးပါသောနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ဥပမာအားဖွငျ့ မျောတျောယာဉျကို မိုငျပေါငျး ၆၂၀ မောငျးနှငျပွီးပါက ဆီပမာဏကို ပွနျလညျ စဈဆေးသငျ့ပွီး မိုငျပေါငျး ၂၅၀ မောငျးနှငျပွီးပါက ကားအငျဂငျြလပေေါကျကို လဲပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။ နှဈစဉျ စဈဆေးမှုကို ပွုလုပျသငျ့အပွငျ နတေို့ငျးစဈဆေးမှု(အငျဂငျြဆီပမာဏ၊ တာယာလဖေိအား၊လကောမှနျ စသညျဖွငျ့) ကိုလုပျဆောငျဖို့မမပေ့ါနှငျ့။ လုပျရိုးလုပျစဉျစဈဆေးမှုမြားသညျ ရာသီဥတုနှငျ့မောငျးနှငျသညျ့ ခရီးမိုငျပျေါမူတညျသညျကို အမှတျရပါ။
၂. ပစ်စညျးဝနျပိုတငျမောငျးနှငျခွငျးကို ရှောငျရှားပါ
ဝနျပိုတငျမောငျးနှငျခွငျးကကား၏ အောကျပိုငျးစနဈ၊ စတီယာရငျစနဈ၊ဂီယာစနဈ၊တာယာနှငျ့ အငျဂငျြစသညျ့ စနဈအားလုံးလိုလိုကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဒီလိုဝနျပိုတငျမောငျးနှငျခွငျးကသငျ့ကားရဲ့ လောငျစာဆီ ကိုပိုမိုသုံးစှဲမှုဖွဈစသေညျ့အပွငျ လမျးမပျေါတှငျ ကား၏မောငျးနှငျနိုငျစှမျးကိုပါ ဆိုးကြိုးဖွဈစပေါတယျ။ ဒီလိုမဖွဈစရေနျ ယာဉျမောငျးသူသညျ မောငျးနှငျမညျ့ယာဉျ၏ အမြားဆုံးတငျနိုငျသောဝနျပမာဏအတိုငျးသာတငျဆောငျပွီး မောငျးနှငျသငျ့ပါတယျ။ထို့အပွငျ ကားတှငျ အသုံးမလိုသော ပစ်စညျးမြား လြှော့ခပြွီး အမှနျအသုံးဝငျသောပစ်စညျးကိုသာတငျသငျ့ပါတယျ။
၁. ကား၏ကလပျချြ (clutch) ကို အမြားကွီး အလုပျမပေးပါနှငျ့
ထိုသို့သော အမှားသညျ လကျထိုးဂီယာစနဈရှိသော ကားကိုမောငျးနှငျသူမြားတှငျ အတှမြေ့ားသော အမှားဖွဈပါတယျ။ မီးပှိုငျ့ အကွာကွီးမိနခြေိနျတှငျကလပျချြကိုအကွာကွီးမနငျးထားပါနှငျ့။ကားရပျနားသငျ့သောအခြိနျတှငျ အနားမပေးပဲ ကလပျချြနငျးကာ ကားကို အလုပျပိုလုပျစသေညျ့အတှကျစကျပိုငျးဆိုငျရာစနဈကိုလငျြမွနျစှာခြို့ယှငျးစပေါတယျ။ တိုတောငျးသောရပျတနျ့ခြိနျတှငျ ဂီယာကို ပုံမှနျ(Neutral) စနဈသို့ပွောငျးပွီး စတငျမောငျးနှငျတော့မညျဆိုမှ ကလပျချြကိုနငျးပါ။
အပိုဆောငျးလှညျ့ကှကျ- ကားလကောမှနျအကျရာကို ကွကျသှနျဖွူသုံးပွီး ဘယျလိုပွငျနိုငျမလဲ
ဟငျးပှဲကို ပိုမွိနျစသေညျ့ ကွကျသှနျဖွူ၏အရသာနှငျ့ အနံ့ကွောငျ့ လူတျောတျောမြားမြားကွကျသှနျဖွူကိုကွိုကျနှဈသကျကွပါတယျ။ သို့သျော ကွကျသှနျဖွူ၏ကားပွငျဆငျမှုအတှကျအံ့သွဖှယျလုပျဆောငျမှုကိုသငျသိပါသလား။ကွကျသှနျဖွူတဈမှာယူပွီး ကွကျသှနျဖွူကိုဒေါငျလိုကျလှီးခလြိုကျပါ။ ထို့နောကျ လှီးထားသောကွကျသှနျဖွူဖွငျ့ လကောမှနျအကျရာကိုပှတျပွီး ထှကျလာသောအရညျကို စက်ကူ သို့မဟုတျ လကျသုတျပုဝါဖွငျ့ သုတျလိုကျပါ။ပရျောဖကျရှငျနယျကကြ ပွငျဆငျခွငျးမဟုတျသျောငွားလညျး ထိုအကျရာကို ပွနျမပွငျမှီအခြိနျအထိ အကျရာပိုမဆိုးသှားနိုငျအောငျထိနျးထားနိုငျပါတယျ။
စာဖတျသူတို့လညျးကားကိုတဈသကျလုံးကွာရှညျစှာ သုံးနိုငျသောနညျးလမျးရှိပါက ကောမနျ့တှငျမြှဝပေေးပါဦး…